DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle & Gaadiid dagaal oo….
DAAWO:<b>Somaliland</b> oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle &amp; Gaadiid dagaal oo….
DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle & Gaadiid dagaal oo…. Bogga Hore Wararka Maanta Puntland Galmudug Somalia Jubbaland Somaliland #2876 (no title) Bogga Hore Wararka Maanta Puntland Galmudug Somalia Jubbaland Somaliland #2876 (no title) DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle & Gaadiid dagaal oo…. December 8, 2019 Mahad Jama 0 BUUHOODLE(P-TIMES)- Iyadoo maalmo ka hor madaxweyne ku xigeenka Puntland uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Cayn isla markaasna mudooyinkii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegaya in jabhad cusub laga aas aasayo gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay saraakiil ka tirsan Somaliland oo ku sugan Buuhoodle ay sheegeen in ay soo af jari doonaan cid walba oo duulaan ku ah danaha Somaliland. Gaadiid dagaal iyo ciidamo aad u tira badan iyaga oo ku dhex sugan ayey sheegeen in ay ka tirsan ciidamada Somaliland isla markaasna ay ka amar qaataan oo kaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, taas badalkeeda aysan ogolaan doonin jabhad cusub oo laga aas aaso Buuhoodle. Waxa ay shaaca ka qaadeen in ay bada joogaan shakhsiyaad ay sheegeen in ay ka wadaan Buuhoodle dhismaha jabhadan cusub oo aan weli la shaacin isla markaasna ay gacanta kusoo dhigi doonaan dhawaan. Deegaanka Buuhoodle ayey sheegeen in ay ku dhuumaalaysanayaan dadka raba in ay aas aasaan jabhadan cusub ayna gacanta kusoo dhigi doonaan. HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA U Sii Gudbi Asxaabtaada Be the first to comment	Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published.Comment Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Current ye@r * Leave this field empty Puntland Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland & Duufaan xoogan oo ku dhuftay deegaanada qaarkood	DHAGAYSO:Qaar kamid ah garoomada Puntland oo hakad galay & Duulimaadyo ay baajiyeen roobabku	Puntland oo faah faahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay roobabkii da’ay	DHAGAYSO:Dowladda oo ka hadashay roobabka dabaylaha wata ee ka da’ay Puntland	Garowe oo kala xidhan & Deegaano hoostaga oo khasaare xoogan uu gaadhay	Somalia QORMO: Astaamo muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu markale ku guulaysan karo talada dalka oo muuqda	DHAGAYSO:Dowladda oo ka hadashay roobabka dabaylaha wata ee ka da’ay Puntland	XOG: Maxay ka wada hadleen Dhooba-Daareed, Ambasador Camay & Ergayga gaarka ah ee Turkiga ugu xilsaaran wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland.	Dowladda oo iska fogaysay inay lug ku leedahay dooda u dhaxaysa CC Shakuur iyo Culimada	DAAWO VIDEO:Xasan Daahir Aweys Qaabkaa U Nool yahay Yaase U Ogolaatay Live facebook Inuu Soo Galo?	Somaliland DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle & Gaadiid dagaal oo….	DAAWO:Somaliland oo Qaylo afka furatay, Qorshe halis ah oo socda & Dhismaha maamulka Sool Iyo Sanaag oo IGAD….	XOG: Maxay ka wada hadleen Dhooba-Daareed, Ambasador Camay & Ergayga gaarka ah ee Turkiga ugu xilsaaran wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland.	Ciidamo ka tirsan Somaliland oo iskaga baxay Jiidaha deegaanada Tukaraq &
DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle &#038; Gaadiid dagaal oo&#8230;. Bogga Hore Wararka Maanta Puntland Galmudug Somalia Jubbaland Somaliland #2876 (no title) Bogga Hore Wararka Maanta Puntland Galmudug Somalia Jubbaland Somaliland #2876 (no title) DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle &#038; Gaadiid dagaal oo&#8230;. December 8, 2019 Mahad Jama 0 BUUHOODLE(P-TIMES)- Iyadoo maalmo ka hor madaxweyne ku xigeenka Puntland uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Cayn isla markaasna mudooyinkii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegaya in jabhad cusub laga aas aasayo gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay saraakiil ka tirsan Somaliland oo ku sugan Buuhoodle ay sheegeen in ay soo af jari doonaan cid walba oo duulaan ku ah danaha Somaliland. Gaadiid dagaal iyo ciidamo aad u tira badan iyaga oo ku dhex sugan ayey sheegeen in ay ka tirsan ciidamada Somaliland isla markaasna ay ka amar qaataan oo kaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, taas badalkeeda aysan ogolaan doonin jabhad cusub oo laga aas aaso Buuhoodle. Waxa ay shaaca ka qaadeen in ay bada joogaan shakhsiyaad ay sheegeen in ay ka wadaan Buuhoodle dhismaha jabhadan cusub oo aan weli la shaacin isla markaasna ay gacanta kusoo dhigi doonaan dhawaan. Deegaanka Buuhoodle ayey sheegeen in ay ku dhuumaalaysanayaan dadka raba in ay aas aasaan jabhadan cusub ayna gacanta kusoo dhigi doonaan. HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA &nbsp; U Sii Gudbi Asxaabtaada Be the first to comment	Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published.Comment Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Current ye@r * Leave this field empty Puntland Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland &#038; Duufaan xoogan oo ku dhuftay deegaanada qaarkood	DHAGAYSO:Qaar kamid ah garoomada Puntland oo hakad galay &#038; Duulimaadyo ay baajiyeen roobabku	Puntland oo faah faahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay roobabkii da&#8217;ay	DHAGAYSO:Dowladda oo ka hadashay roobabka dabaylaha wata ee ka da&#8217;ay Puntland	Garowe oo kala xidhan &#038; Deegaano hoostaga oo khasaare xoogan uu gaadhay	Somalia QORMO: Astaamo muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu markale ku guulaysan karo talada dalka oo muuqda	DHAGAYSO:Dowladda oo ka hadashay roobabka dabaylaha wata ee ka da&#8217;ay Puntland	XOG: Maxay ka wada hadleen Dhooba-Daareed, Ambasador Camay &#038; Ergayga gaarka ah ee Turkiga ugu xilsaaran wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland.	Dowladda oo iska fogaysay inay lug ku leedahay dooda u dhaxaysa CC Shakuur iyo Culimada	DAAWO VIDEO:Xasan Daahir Aweys Qaabkaa U Nool yahay Yaase U Ogolaatay Live facebook Inuu Soo Galo?	Somaliland DAAWO:Somaliland oo war culus kaga dhawaaqday gudaha Buuhoodle &#038; Gaadiid dagaal oo&#8230;.	DAAWO:Somaliland oo Qaylo afka furatay, Qorshe halis ah oo socda &#038; Dhismaha maamulka Sool Iyo Sanaag oo IGAD&#8230;.	XOG: Maxay ka wada hadleen Dhooba-Daareed, Ambasador Camay &#038; Ergayga gaarka ah ee Turkiga ugu xilsaaran wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland.	Ciidamo ka tirsan Somaliland oo iskaga baxay Jiidaha deegaanada Tukaraq &#038;